धान रोपाईंको चटारो वीच रासायनिक मल अभाव – Radio Bageshwori FM 94.6 MHz
धान रोपाईंको चटारो वीच रासायनिक मल अभाव
असारको दोस्रो साता लागेसँगै धान रोपाईंको चटारो बढ्दै जाँदा किसान रासायनिक मलविहिन अवस्थामा पुगेका छन् । आवश्यक रासायनिक मल व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सरकारी निकायले नै माग अनुसार उपलब्ध गराउन नसक्दा यसवर्ष शुरुबाटै मल अभाव भएको हो । सरकारले टेन्डर प्रकृयाबाट मल खरिद गरेको भएपनि समयमा आयात हुन नसक्दा अभाव देखिएको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीले बताउनुभयो । प्रवक्ता राजभण्डारीले अहिलेको समयमा माग बढ्ने कुरालाई ध्यानमा राखी, समयमै एलसी खोलिएको भएपनि कोभिड १९ को महामारीका कारण मल आउन नसकेको जानकारी दिनुभयोे ।
यता लेवरको अभावमा लोड गर्न समस्या भएपछि अढाई महिनादेखि मल आएर भारतको कोलकत्तामा थन्किएको छ । प्रवक्ता राजभण्डारीका अनुसार सप्लायर्सले साल्ट ट्रेडिङमार्फत २१ हजार ५ सय टन युरिया आउनुपर्ने भएपनि कहाँबाट ल्याउने भन्ने अझै टुंगो नलागेको बताइएको छ । ओमनबाट आउन अझ बढि समय लाग्ने भएपछि सप्लायर्सले अन्यत्रका लागि गुजरात बन्दरगाहबाट ल्याएको मल उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको पनि कर्पोरेसनले जनाएको छ । साल्ट टे«डिङसँग अहिले ५ हजार टन युरिया, ८ हजार टन डिएपी र १ हजार ४ सय टन पोटास मौज्दात रहेको छ । तर समयमा मल आईनपुग्दा किसानले भने मल बिनानै रोपाई गरिरहेका छन ।
‘बाँके र बर्दियामा व्यवसायिक अंगुर खेती उपयुक्त’
डुडुवा नहरबाट कहिले आउला पानी ?
परसपुरवासीद्धारा सिँचाई सुविधाको माग
नेपालगञ्ज, मंसीर–७ । बाँके निर्वाचन क्षेत्र ३ स्थित परस्पुरबासीले सिंचाइँ सुविधाको माग गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट बाँके क्षेत्र नम्वर ३ का प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बादशाह कुर्मी, र ३ ख का प्र
नेपालगञ्जमा नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक डिजिटल शौचालय सञ्चालनमा
माघ ७, २०७६ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक डिजिटल शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । सञ्चालनमा आएको डिजिटल शौचालयको जमीनमाथि निर्माण गरिएको संरचना फोल्डिङयुक्त छ । अपाङ्गता तथा महिलामैत
बिचार/ब्लग राजनीति अचम्मको जागिर, मतदाता क्यासिनोका ग्राहक जस्ता !
खेलकुद राष्ट्रिय टिमका फरवार्ड जर्जप्रिन्स सेनाको क्याप्टेनमा बढुवा
न्युज मिश्रा र गुप्तालाई मतदान गर्न उद्योगी ब्यवसायीको अपिल